एस र गुडविलले पनि बनाए आस्वा निःशुल्क, कुन–कुनले दिए सित्तैमा सेवा ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » एस र गुडविलले पनि बनाए आस्वा निःशुल्क, कुन–कुनले दिए सित्तैमा सेवा ?
काठमाडौं : एस डेभलपमेन्ट बैंक र गुडविल फाइनान्सले पनि आस्वा प्रणालीबाट निःशुल्क सेयर भरिदिने भएका छन् । ग्राहक तान्न शुल्क घटाउनेदेखि निःशुल्क गर्नेसम्म होडबाजी चलिरहेका बेला एस र गुडविल पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हुन् । गुडविल फाइनान्सले सार्वजनिक निष्कासन (आइपीओ) मा आस्वामार्फत आवेदन दिँदा अबदेखि कुनै पनि शुल्क नलाग्ने जनाएको छ । साथै, फाइनान्सले सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको सि—आस्वामार्फत अनलाइन आवेदन दिन सकिने व्यवस्था पनि मिलाएको छ । ग्राहकले सि आस्वाका लागि गुडविलमा रहेको आफ्नो खाताको सीआरएन (कस्टुमर रिफरेन्स नम्बर) लिनुपर्नेछ । निःशुल्क आस्वा सुविधा गुडविल फाइनान्सको सम्पूर्ण शाखा कार्यालयबाट लिन पाइनेछ । यता, एस डेभलपमेन्ट बैंकले पनि सोमबारदेखि नै लागू हुने गरी आस्वा निःशुल्क बनाएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक तान्न धमाधम आस्वा शुल्क नलाग्ने बनाइरहेका छन् ।
यसअघि कृषि विकास बैंक, सानिमा बैंक, सिद्धार्थ बैंक, एनआइसी एसिया बैंक, बैंक अफ काठमान्डूलगायतले आस्वालाई निशुल्क बनाइसकेका छन् । उता, आस्वा निशुल्क नबनाउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि धमाधम आस्वा शुल्क घटाउन भने थालेका छन् । केहीले आस्वा शुल्क घटाएर ५० रुपैयाँ देखि १ रुपैयाँसम्ममा झारिसकेका छन् । प्रभुले १ रुपैयाँमा आस्वा भरिदिने भनेको छ भने इन्भेस्टमेन्ट बैंकले २० रुपैयाँ शुल्क लिने जानकारी दिएको छ । उता, नेपाल बैंकले १० रुपैयाँ शुल्क लिने घोषणा गरेको छ । पुँजीबजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले सबै सार्वजनिक निष्कासनमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी आस्वा अनिवार्य गर्न लागेको छ । बोर्डको प्रावधान अनुसार आस्वा शुल्क १०० रुपैयाँसम्म लिन पाइनेछ । सेयर भर्दा लाग्ने शुल्क लगानीकर्ताकै खातामा ब्लक गरेर राख्ने प्रणाली हो आस्वा । यसमा सेयर बाँडफाँट भएपछि सेयर परे बराबरको पैसा कटाएर बाँकी लगानीकर्ताकै खातामा फिर्ता दिइन्छ ।